ဒီပို.စ်ကို ဖတ်ရင်းနဲ. တစ်ခုတော့ ရလိုက်တယ်………. အော် ပညာတတ်တွေ ကလိမ်ကကျစ်လုပ်ရင် သူများထက်ဆိုးတယ် ဆိုတာလေးပါ…………….. :D
ကျနော်ဆို ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပြန်တွေးတယ် ဘာမှမမှန်တဲ့အတွက် ဘာမှမကောင်းဘူး :D
ဟီး… နောက်တာပါ။ :D
ဒီတခါ ကိုပေါက် ရန်ကုန်လာမှ ဗိုက်ကလေးကိုခေါ်ပြီး လက်စားသွားချေကြမယ်…. :D